Fanahy Masina (kristianisma) - Wikipedia
Fanahy Masina (kristianisma)
Ny Fanahy Masina, ho an' ny Kristiana, dia ny herin' Andriamanitra izay entiny miasa. Ao amin’ ireo Fiangonana kristiana be mpanaraka sy mitazona ny tenim-pinoana (dôgma) mahazatra (katôlika sy ôrtôdôksa ary ny ankamaroan’ ny prôtestanta) dia tsy hery fotsiny ihany ny Fanahy Masina fa persôna fahatelon’ Andriamanitra, manampy ny Ray sy ny Zanaka ao amin’ ny Trinite. Ny taranja teôlôjika andinihana sy ampianarana ny amin’ ny Fanahy Masina dia ny Pneomatôlôjia.
1 Ny Fanahy Masina araka ny Baiboly
1.1 Ny Fanahy Masina araka ny Testamenta Taloha
1.2 Ny Fanahy Masina araka ny Testamenta Vaovao
2 Fampianaran' ny fiangonana samihafa
2.1 Ny mihevitra ny Fanahy Masina ho persônan' Andriamanitra
2.1.1 Ny Fanahy Masina ao amin' ny fanekem-pinoana apôstôlika
2.1.1.1 Ny Fanahy Masina araka ny Fiangonana Tandrefana
2.1.1.2 Ny Fanahy Masina araka ny Fiangonana Tatsinanana
2.2 Ny mihevitra ny Fanahy Masina ho Andriamanitra iray manokana
2.3 Ny mihevitra ny Fanahy Masina ho hery fotsiny ihany
Ny Fanahy Masina araka ny BaibolyModifier
Ny Fanahy Masina araka ny Testamenta TalohaModifier
Maro ireo andinin-tsoratra ao amin' ny Testamenta Taloha izay milaza mivantana ny Fanahy Masina na heverin' ny teôlôjiana fa milaza izany. Isan' izany ny ao amin' ny Bokin' ny Genesisy (Gen 1,2; 2,7), ny ao amin' ny Bokin' ny Salamo (Sal 51 (50), 13; 98 (97), 1), ny ao amin' ny Bokin' i Jeremia (Jer 23, 9), ny ao amin' ny Boky faharoan' i Samoela (2Sam 23, 2-3), ny ao amin' ny Bokin' i Isaia (Isa 11, 1-2), ary ny ao amin' ny Bokin' i Joela (Joel 2, 28-29).
Ao amin' ny jodaisma dia רוח הקודש / ruakh ha-kodesh ("fanahy masina") na Fanahin' Andriamanitra ny Fanahy Masina. Ny andian-teny hoe Fanahy Masina dia fandraisana sy fandikana ny teny hebreo hoe רוח הקודש / ruakh ha-kodesh (midika hoe "fanahy masina"). Hita ao amin' ny Baiboly amin' ny teny hebreo koa ny hoe רוּחַ קָדְשְׁךָ / ruakḥ qodshəka, "ny fanahinao masina" (Salamo 51.11), sy רוּחַ קָדְשׁוֹ / ruakḥ qodshō, "ny fanahiny masina" (Isaia 63.10-11).
Salamo 51.11 "Aza manary ahy hiala eo anatrehanao; ary aza manaisotra ny Fanahinao Masina (רוּחַ קָדְשְׁךָ) amiko." (Ny Baiboly) / Salamo 51.13 "Aza ariana lavitra ny tavanao aho; aza esorina amiko ny fanahinao masina." (Ny Baiboly Masina)
Isaia/Izaia 63.10-11 "10 Fa ireo kosa dia niodina ka nanome alahelo ny Fanahy Masiny (רוּחַ קָדְשׁוֹ); dia tonga fahavalony Izy ka niady taminy. Ary ny olony dia nahatsiaro ny andro taloha ela, dia ny tamin' i Mosesy. 11 Aiza Ilay nitondra azy mbamin' ny mpiandry ondriny niakatra avy tamin' ny ranomasina? Aiza Ilay nametraka ny Fanahy Masiny tao aminy, ..." (Ny Baiboly) / "10 Izy ireo kosa anefa niodina sy nampalahelo ny Fahaniny Masina; ka dia tonga fahavalon' izy ireo izy tamin' izay, ary ny tenany no niady tamin' ireny 11 Dia nahatsiaro ny andro fahiny, ny andron' i Moizy, ny vahoakany! Aiza ilay nitondra niakatra avy tamin' ny ranomasina, ny mpiandry ny andian' ondriny? Aiza ilay nametraka teo amin' izy ireo, ny Fanahiny Masina" (Ny Baiboly Masina)
Ny andian-teny izay nadika hoe "fanahin'Andriamanitra" dia miseho koa:
Genesisy/Jenezy 1.2 "Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana; ary aizina no tambonin' ny lalina. Ary ny fanahin' Andriamanitrananomba tambonin' ny rano." (Ny Baiboly) / "Tsy nisy endrika sady foana ny tany; ny aizina nanarona ny hantsana ary ny fanahin' Andriamanitra nisonenika tambonin' ny rano." (Ny Baiboly Masina)
1 Samoela 16.13 "Ary Samoela nandray ny tandroka feno diloilo ka nanosotra azy teo amin' ny rahalahiny; ary ny Fanahin' i Jehovah dia nilatsaka tamin' i Davida hatramin' iny andro iny. Dia nitsangana Samoela ka nankany Rama." (Ny Baiboly) / "Dia noraisin' i Samoela ny tandroka nisy diloilo, ka nohosorany teo afovoan' ny rahalahiny io; ary hatramin' izany andro izany sy tamin' ny andro manaraka, dia nidina tamin' i Davida ny fanahin' ny Tompo Dia niainga Samoela nankany Ramata." (Ny Baiboly Masina)
Salamo 143.10 "Ampianaro hanao ny sitraponao aho; Fa Hianao no Andriamanitro; Aoka ny Fanahinao tsara no hitarihanao ahy amin' izay tany marina." (Ny Baiboly) / "Ampianaro hanao ny sitra-ponao aho fa hianao no Andriamanitro. Ny fanahinao tsara anie hitarika ahy, eo amin' ny làla-mahitsy." (Ny Baiboly Masina)
Isaia/Izaia 44.3 "Fa handatsaka rano amin' izay mangetaheta Aho, ary riaka ho amin' izay tany karankaina; Eny, handatsaka ny Fanahiko amin' ny taranakao Aho, ary ny fitahiako ho amin' ny terakao." (Ny Baiboly) / "Fa handatsaka rano amin' ny tany mangetana aho; sy sakeli-drano eo amin' ny tany karankaina. Handatsaka ny fanahiko amin' ny taranakao aho, sy ny fitahiako amin' ny solofonao." (Ny Baiboly Masina)
Joela/Joely 3.1 "Ary rehefa afaka izany, dia handatsaka ny Fanahiko amin' ny nofo rehetra Aho; Dia haminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo, ny lahiantitrareo hanonofy, ary ny zatovonareo hahita fahitana." (Ny Baiboly) / "Ary rahefa afaka izany, dia indro fa handatsaka ny Fanahiko amin' ny nofo rehetra aho, ka ny zanakalahy aman-janakavavinareo haminany; ny anti-panahinareo hahita nofy, ny zatovonareo hahazo fahitana." (Ny Baiboly Masina)
Ny Fanahy Masina araka ny Testamenta VaovaoModifier
Tsy vitsy ireo andinin-tsoratra ao amin' ny Testamenta Vaovao miresaka momba ny Fanahy Masina na heverin' ny teôlôjiana fa milaza izany. Isan' izany ny ao amin' ny Evanjelin' i Joany (Joa 15, 26; 16, 8; 1, 32-34; 14, 15-17; 16, 7; 20, 21-22), ny ao amin' ny Asan'ny Apôstôly (Asa 15, 28; 2, 2-4; 2, 16-17; 2, 38), ny ao amin' ny Evanjelin' i Matio (Mat 28, 19; 1, 18; 12, 31–32), ny ao amin' ny Epistily faharoa ho an' ny Kôrintiana (2Kor 13, 13; ny toko faha-12 hatramin' ny faha-14), ny ao amin' ny Evanjelin' i Lioka (Lio 1, 34-35; 2, 25-27), ary ny Epistily ho an' ny Rômana (Rôm 8, 1-2; 14, 16). Atao hoe πνεῦμα / pneũma (midika hoe "fanahy") ny Fanahy Masina amin' ny teny grika. Ny fiangonana tsirairay dia samy manana ny fomba fiheverany ny Fanahy Masina.
Fampianaran' ny fiangonana samihafaModifier
Ny mihevitra ny Fanahy Masina ho persônan' AndriamanitraModifier
Ny fiangonana mino ny Trinite dia manao ny Fanahy Masina ho iray amin' ireo persôna telon' Andriamanitra tokana. Isan' ireo ny Fiangonana katôlika, ny Fiangonana ôrtôdôksa, ny Fiangonana anglikana ary ny ankamaroan' ireo Fiangonana prôtestanta sy ara-pilazantsara. Tsy mitovy tanteraka anefa ny fampianaran' izy ireo. Hita izany tsy fitoviana izany eo amin' ny fanekem-pinoana. Ao amin'ny Fanekem-pinoana apôstôlika (izay tsy ampiasain' ireo Fiangonana Tatsinanana, isan' izany ny Ôrtôdôksa) dia tsy ahitana afa-tsy ny hoe "Mino ny Fanahy Masina aho", ka tsy ahafantarana na persôna na Andriamanitra ny Fanahy Masina. Ny Fanekem-pinoana nikeana-kônstatinôpôlitana dia manamafy ny maha Andriamanitra ny Fanahy Masina nefa tsy mampitombo isa an' Andriamaitra izany.
Ny Fanahy Masina ao amin' ny fanekem-pinoana apôstôlikaModifier
Voarakitra ao amin' ny fiekem-pinoana apôstôlika izay tokony hinoana momba ny Fanahy Masina, araka izao: "Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan’ ny tena amin’ ny maty ary ny fiainana mandrakizay." (dikan-teny prôtestanta malagasy).
Ny Fanahy Masina araka ny Fiangonana TandrefanaModifier
Ny Fanekem-pinoana nikeana dia nisy tovana natao taty aoriana ka nampidirin' ny Fiangonana Tandrefana miteny latina ny teny hoe "sy tamin' ny Zanaka" (grika: καὶ τοῦ Υἱοῦ / kai tou Uiou; latina: Filioque) izay nanova ny tokony hinoana momba ny fifandraisan' ny Fanahy Masina sy ny Zanaka ka lasa mivoaka avy amin' ny Ray sy ny Zanaka ny Fanahy Masina. Nandova izany koa ireo fiangonana mino ny Trinite izay nateraky ny Refôrmasiona prôtestanta araka izao:
"Credo ... Et in Spíritum Sanctum, Dόminum, et vivificántem: qui ex Patre Filiόque procédit. Qui cum Patre, et Filio simul adorátur, et conglorificátur : qui locútus est per Prophétas."
"Izaho mino ny Fanahy Masina, Tompo Loharanon'aina, avy amin'ny Ray sy ny Zanaka; tsaohina sy omem-boninahitra miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka, ary niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany." (Dikan-teny katôlika amin'ny teny malagasy).
Ny Fanahy Masina araka ny Fiangonana TatsinananaModifier
Tsy eken' ny Fiangonana Tatsinanana (isan' izany ny Fiangonana ôrtôdôksa sy ny Fiangonana armeniana) anefa ny nampitsofohan' ny Fiangonana Tandrefana ilay hevitra hoe "nivoaka tamin' ny Zanaka koa ny Fanahy Masina" izay nomena ny anarana latina hoe Filioque (grika: καὶ τοῦ Υἱοῦ / kaὶ toū Uioū). Isan' ny zavatra nampisaraka ny Fiangonana tatsinanana tamin' ny Fiangonana tandrefana izany taty aoriana. Amin' ny Fiangonana Tatsinana dia nivoaka avy amin' ny Ray fotsiny ny Fanahy Masina fa tsy tamin' ny Zanaka koa.
Izao ny ampahan' ny fanekem-pinoana:
"Πιστεύομεν εἰς ἕνα ... καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν·" (Dikan-teny grika)
"Isika mino ... Sy ny Fanahy Masina, Izay Tompo sady Mpamelona; Izay avy amin’ny Ray; Izay itsaohana sy omem-boninahitra miaraka amin’ny Ray sy ny Zanaka; Izay niteny tamin’ny alàlan’ny mpaminany;" (Dikan-teny malagasy)
Ny mihevitra ny Fanahy Masina ho Andriamanitra iray manokanaModifier
Tamin' ny fotoana niadian-kevitra momba ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina dia nampangaina ho mino andriamanitra telo (triteisma) ireo nanohana ny Trinite. Ankehitriny dia misy ny fiangonana izay manaiky fa Andriamanitra mahaleo tena fa tsy persônan' Andriamanitra tokana ny Fanahy Masina, tsy iza izany fa ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany. Ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina dia Andriamanitra telo samy manana ny persônany sy ny natiorany avy nefa mifameno.
Ny Fanahy Masina dia voalazan' ny fampianaran' ny Olomasin' ny Andro Farany fa mpikambana fahatelo amin’ ireo Andriamanitra, sady lazainy fa olona Fanahy tsy manana vatana nofo sy taolana, araka ny fampianarany ao amin' ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana (F&F): "Ny Ray dia manana vatana nofo sy taolana azo tsapaina toy ny an’ ny olona; ny Zanaka koa; fa ny Fanahy Masina dia tsy manana vatana nofo sy taolana fa vatana Fanahy, fa raha tsy izany dia tsy afaka mitoetra ao anatintsika ny Fanahy Masina." (F&F 130:22).
Ny mihevitra ny Fanahy Masina ho hery fotsiny ihanyModifier
Ireo fiangonana tsy mihevitra fa ny Trinite dia midika fisian' Andriamaitra telo dia mampianatra fa herin' Andriamanitra ny Fanahy Masina fa tsy persôna no tsy Andriamanitra. Teo amin' ny tantara dia nisy ireo nihevitra ny Fanahy Masina ho fomba fisehon' ilay Andriamanitra tokana, izany no atao hoe môdalisma: Ny Ray sy ny Fanahy Masina dia tsy iza fa ilay Andriamanitra tokana tonga nofo tao amin' i Jesoa Kristy ihany. Ankehitriny dia maro ny fiangonana tsy mino ny Trinite izay milaza fa hery entin' Andriamanitra fa tsy persôna ny Fanahy Masina.
Amin' ny Vavolombelon' i Jehovah, ohatra, dia hery miasa an’ Andriamanitra ny fanahy masina, tsy mitambatra ho Trinite ny Ray sy ny Zanaka (Jesoa) ary ny fanahy masina. Tsy mampiasa sora-madinika ny Vavolombelon' i Jehovah raha manoratra io herin' Andriamanitra io (fanahy masina fa tsy Fanany Masina) mba hanehoany ny tsy maha persôna an' izany.
Tsindrimandry na Fitsilovana
Fanomezan' ny Fanahy Masina
↑ Izao izany ao amin' ny Fiangonana katôlika malagasy: "Izaho mino ny Fanahy Masina, ny Fiangonana Masina, katôlika, ny fiombonan’ ny olomasina, ny fanalana ny ota, ny fitsanganan’ ny vatantsika ho velona, ary ny fiainana mandrakizay".
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanahy_Masina_(kristianisma)&oldid=1012069"
Dernière modification le 24 Mey 2021, à 09:40
Voaova farany tamin'ny 24 Mey 2021 amin'ny 09:40 ity pejy ity.